Meicet |Umatshini waseTshayina we-3D woBuso obugcweleyo boHlalutya loLusu lweSalon yobuhle iMeicet MC10 yokwenziwa kunye neFactory
5 ISpectra:RGB, CPL, PPL, UV, Wood's
10 Ulwimi:IsiTshayina, isiNgesi, isiJamani, iSpanish, isiFrentshi, isiTaliyane, isiKorea, isiPhuthukezi, isiUkraine, isiHebhere
12 Imifanekiso:Indawo eBomvu, iUV, iMonochrome, iWood's, njl.
Imisebenzi:Khangela imibimbi, uvakalelo, ukuba nebala lebala, i-acne, iPore, njl.
Izibane ze-LED:360 ° Ukusasazwa koMthombo wokuKhanya oMnqamlezo
I-Meicet MC10 AI yoMshini woHlalutyo lweLusu lobuNgcali
Yenza Uthethwano Luchaneke, Fumana Ukuthembana kube lula
I-MEICET Skin Analysis System inikezela ngamava aphuculwe kakhulu okubonisana nobuhle kunye nokhathalelo lwesikhumba.
Isoftware ye-MEICET yenza lula inkqubo yomfanekiso usebenze kakhulu.
Iitekhnoloji zokuhlalutya i-multi-spectral imaging isetyenziselwa ukulinganisa kunye nokutyhila umgangatho kunye neemeko zesikhumba ezingaphantsi komhlaba.
Ngokusebenzisa umhlalutyi wethu wolusu lobuchwephesha, ukubonisana nonyango oluchanekileyo kunokunikezelwa kubathengi ngokulula.
Umthombo wokukhanya we-LED ongeniswe eJapan
Iilwimi ezili-10 ezixhaswayo
Umgangatho wokwenziwa kwamazwe ngamazwe kumzi-mveliso ongowakho
Yongeza ulwimi olulungele wena kuvumelekile
Uhlaziyo lwesoftware yasimahla
5 Imowudi yeSpectra
Ukukhanya kwe-RGB, ukuKhanya kwe-Cross-Polarized, ukukhanya kwe-Parallel-Polarized, ukukhanya kwe-UV, ukukhanya kwe-Wood
Umatshini wethu uya kudubula iifoto ezi-5 ngemizuzwana ngokusebenzisa i-spectrum eyahlukileyo.Le mifanekiso 5 iya kuhlalutywa Meicet App, yaye ekugqibeleni 12 imifanekiso ingafumana ukunceda ukuveza iingxaki ulusu ezahlukeneyo.
Itekhnoloji ye-AI ye-Smart
Itekhnoloji yokukhutshwa kweempawu zesikhumba kunye necomputing yamafu.
Umatshini wokuhlalutya ulusu lwe-MEICETngumncedisi osebenzayo kwaye oyimfuneko kwi-salon yobuhle, ikliniki yesikhumba kunye nesixhobo esifanelekileyo kwiinkampani zokuthambisa.
12 Imifanekiso Ehlalutyiweyo
Ubuthathaka / iibala ezingaphezulu / imibimbi / imingxuma / amabala / amaqhakuva / amabala e-UV / ubudala bolusu / ithoni yesikhumba / intsalela yekhemikhali
MC10 Software Functions
Usiba lovavanyo lwesikhumba
Le peni inokuvavanya ibunzi, ubuso obusekhohlo kunye nedatha yobuso basekunene bokufuma, i-oyile kunye nokunwebeka njengesiphumo sokongezelela.into.
Idatha ye-Oli yokuNwaba
I-oyile yomswakama kunye nedatha ye-elasticity evavanywa ngepeni yokuhlola ulusu ingaboniswa kwingxelo.
Abasebenzisi banokongeza kwaye balawule iimveliso, unyango kunye neenkonzo kwi-SETTINGS- SOLUTIONS ngokulula.
Abathengi banokufumana izisombululo ezicetyiswayo xa bejonga ingxelo.
1. Ukuxhasa ukuthelekiswa kwemifanekiso eyahlukeneyo ngexesha elifanayo.Ngokomzekelo, ekuxilongweni, sinokukhetha imifanekiso emi-2 eyahlukeneyo yokuxilonga uphawu olufanayo lwesikhumba, njengokuba, ukuhlalutya ingxaki yee-pigments, unokukhetha i-CPL kunye nemifanekiso ye-UV.Umfanekiso we-CPL utyhila iingxaki ze-pigment ezinokubonwa ngeso lenyama, kwaye umfanekiso we-UV ubamba iingxaki ezinzulu ze-pigment ezingabonakaliyo ngeso lenyama.
2. Imifanekiso yemihla eyahlukeneyo inokuthelekiswa njengesiseko sengxoxo esebenzayo.Iifoto ngaphambi nangemva konyango zingakhethwa ukuba zithelekise ukubonisa umphumo wokuchasana ngaphambi nangemva konyango.
3. Xa uthelekisa imifanekiso, ungasondeza okanye usondeze kakhulu.Inokuphumla ukuya kumaxesha angama-5 umfanekiso wokuqala;emva kokusondeza iimpawu zengxaki kunokubonwa ngokucacileyo.
I-MC10 yeMirror yoBugcisa bokuHlalutya kweSikhumba soMfanekiso woBuso
Imodeli ye-IPd esebenzayo
A1822, A1893, A2197, A2270
Ekhohlo, Ngaphambili, Ekunene
Ngaphambili: Eyona ndawo yoBuso yoHlalutyi ulusu lweeVenkile zeeSalon zeMeicet MC88
Okulandelayo: I-BCA ye-Bioelectrical Impedance Body Composition Analyzer Meicet BCA100
Inkqubo yoHlalutyi lweLusu olugcweleyo
Uhlalutyi lweSkin Scanner ephathwayo
Inkqubo yoHlalutyo lwesikhumba
Inkqubo yokuxilongwa kwesikhumba
I-BCA ye-Bioelectrical Impedance Body Composition An...
IiVenkile zobuhle zokuHlalutya Ulusu loBuso kwiiSaluni zeM...